June 29, 2020 - PARIJATMEDIA
घर भित्रै थुनियो पशुपतिनाथ मन्दिरको ऐतिहा’सिक शिवलिंग
काठमाडौं, असार १५- पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिम ढोकाबाट अन्नपूर्ण भण्डारतिर आउँदा बाटोमा एउटा घर छ। लामो कालखण्ड पार हुँदै जाँदा त्यही घरभित्र थुनिन पुगेको छ– पशुपति नाथ मन्दिरको ऐतिहासिक शिवलिंग। थुनिएको शिवलिंग यति महत्त्ववशाली हो, जहाँ पशुपति मन्दिरका मूलभट्टले गर्भगृहमा प्रवेश गर्नुअघि शपथ लिनुपर्छ। पशुपति क्षेत्रमा यस्ता ११ शिवलिंग छन्। जसलाई एकादशरुद्र भनिन्छ। शिवका पुजारीले ती एकादशरुद्रलाई साक्षी नराखेसम्म मन्दिरको गर्भगृहमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। तिनै एकादशरुद्रमध्ये कम्तीमा दुइटा शिवलिंग व्यक्तिका घरभित्र थुनिएका छन्। अर्को रुद्र भुवनेश्वरी टोलस्थित अर्को घरभित्र थुनिएको पाइएको छ। पशुपतिको मूल मन्दिरदेखि करिब पाँच सय मिटर दूरीमा रहेको उक्त घरमा बेवास्तापूर्ण ढंगले थुनिएको छ मूलभट्टलाई शपथ खुवाउने शिवलिंग। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा आकाश क्षेत्रीले लेखेका छन् ।
पीसीआर मेसिन स्थापनाका लागि गौरिका’ले दिइन् १ लाख
काठमाडौं : कोरोना भाइरस जाँच गर्ने पीसीआर मेसिन स्थापनाका लागि पौडी खेलाडी गौरिका सिंहले १ लाख सहयोग गरेकी छिन् । उनले डडेल्धुरामा स्थापना हुन लागेको पीसीआर मेसिन स्थापनाका लागि हजुरबुबा लोकभक्त राणामार्फत् आर्थिक सहयोग गरेकी हुन् । गौरिका अहिले आफ्ना आमाबुबासँग बेलायतमा छिन् । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा स्वर्ण जितेर कीर्तिमानसमेत बनाएकी सिंहको पुख्र्यौली घर सुदूरपश्चिम हो । उनको पुर्खा सुदूरपश्चिमको बझाङका हुन् । यसअघि पीसीआर मेसिन खरिदका लागि तेक्वान्दोका दिपक बिष्ट र उनकी श्रीमती आयशा शाक्यले २० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, तेक्वान्दो संघका उपाध्यक्ष भानुबहादु चन्द, क्रिकेटका प्रशिक्षक जगत टमाटा, क्रिकेटर नरेश बुढा ऐरले पनि आर्थिक सहयोग गरिसकेका छन् । कोरोना जाँचका लागि मेसिन अभाव भएपछि स
BREAKING: नेपालमा भोलि देखि साउन ७ सम्म लकडाउन थपियो
मन्त्रिपरिषद बैठकले हाल कायम रहेको लकडाउनको अवधि साउन ७ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकले अहिलेकै अवस्थाको लकडाउनलाई सो मितिसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएकाले अहिलेलाई यही शैलीको लकडाउनलाई साउन ७ सम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको उनले बताए। ‘स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन जरुरत रहेकाले यथास्थितिको लकडाउनलाई लम्ब्याइएको हो’ उनले भने। सरकारले यसअघि असार १ देखि लागू हुनेगरी लकडाउनलाई खुकुलो बनाएको थियाे। जसअनुसार निजी सवारीसाधन जोर विजोर प्रणालीबाट सञ्चालन भइरहेका छन् भने सार्वजनिक सवारीसाधन तथा उद्दारबाहेकका हवाई उडान बन्द छन्। त्यस्तै सीमित बजार पसलहरु सञ्चालन भए पनि भीडभाड हुने सिनेमा हल, सपिङ मल, शैलुन, पार्लर, विद्यालयजस्ता क्षेत्रहरु बन्द अवस्थामा छन्। कोरोनाभाइरसका कारण गत चैत ११ गतेदे
राम्रो स्वभाव भएका स्त्री भयो भने पतिको जिबन एकदम राम्रो हुन्छ । अनि त्यसै गरि राम्रो स्वभाव भएको पति भयो भने पनि स्त्रीको जिबन स्वोर्गीय हुन्छ । तर यी दुइ जना मध्ये एकजना नराम्रो भयो भने दुबैको जिबन नर्ग समान हुन्छ । कतिपय मानिसहरुको स्वभाव यस्तो हुन्छ, जसले एक अर्काको जीवन नर्क बनाउँछ । हामीले महिलाहरुमा पाइने ५ नराम्रा स्वभावबारे जानकारी गराउँदैछौँ, त्येसो त पुरुषहरु चाही सबै राम्रा हुन्छन भन्ने होइनन् । पुरुषका कारण पनि सम्बन्धमा धेरै समस्या आउन सक्छन् । यहाँ स्त्रीहरुको ५ स्वभावको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । १. पतिलाई आफ्नो मात्रै ठान्ने- पति आफ्नो मात्रै हो वा उसको अरुसँग कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने महिलाले हरेक पुरुषको जीवनलाई संकटमा पारिरहेका हुन्छन् । यस प्रकारको स्वार्थी सोंच राख्ने महिलाले पुरुषको सार्वजनिक जीवन ध्वस्त पारिदिन्छन् । फलस्वरुपः हरेक पुरुष आफ्ना बाबु आमा, इष्टमित्
साम्राज्ञी रु’दै आईन लाईभमा, भुवन केसीको स्टाटसमा यस्तो प्र’तिक्रिया(भिडियो)
अहिले कलकारहरु सामाजिक संजाल मार्फत खुलेर बोल्न थालेका छन् । यसै लहरमा निर्माता तथा अभिनेता भुवन केसीले सामाजिक सञ्जालमा नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले आफु माथि भएको दु’र्व्यव’हा’र र न’मिठो अनुभब बाडेकी थिईन् । सोही अभिब्य’क्तिलाई फेसबूकमार्फत नायक भुबन केशिले ज’वाफ फ’र्काएका छन् । साम्राज्ञीले केही दिनअघि इन्स्टाग्राममा एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै ३ वटा फिल्ममा काम गर्दा न’मिठो अनुभव भो’गेको र आफूमाथि दु’र्व्यव’हा’र भएको बताएकी थिइन् । साम्राज्ञीेले पटकपटक फिल्ममा अभिनय गर्ने क्रममा मेकरले न’राम्रो व्यवहा’र गरेको प्रतिक्रि’या दिएकी थिइन् । फिल्म ‘ड्रिम्स’ बाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरेकी साम्राज्ञीले आफूले यो फिल्ममा काम गर्दा न’मीठो व्यवहा’र भो’गेको खबरहबको कुराकानीमा समेत खुलासा गरेकी थिइन् । यसैबीच अभिनेता भुवन केसीले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘जुन थालमा खायो, उही थालमा दुलो पार्ने
एमसीसीबारे अमेरिकाले भन्यो : स्वीकार गर्ने-नगर्ने नेपाल’कै रोजाइ
काठमाडौँ : काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीको अनुमोदन स्वीकार गर्ने नेपालकै रोजाइको विषय भएको जनाएको छ । एमसीसीबारे नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुबीच कडा मतभेद भइरहँदा अमेरिकी दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी यस्तो जनाएको हो । संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नभएको बारे आफू जानकार रहेको पनि अमेरिकाले जनाएको छ । तर यस कार्यक्रमको व्यवहारिकता र निरन्तरता निश्चित गर्न नेपालमा ठोस कदम जरुरी रहेको अमेरिकाले जनाएको छ । नेपालमा जारी विवादलाई लक्षित गर्दैै अमेरिकाले ५० करोड डलरको अनुदान अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुले झण्डै २ करोड ३० लाख मानिसको रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा ढिलाइ गर्नु भएको जनाएको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पछिल्लो समय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । यसको विरोध गर्दै युवाहरु लकडाउनका बावजुद सडकमा आन्दोलित बनेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै समेत एकमत भइसकेको छैन । यसअघिको
कोरोना कहर’को बिच राजधानीमा देखिएको भाववि’ह्वल बनाउने यो दृश्य, देख्नेहरुका आँखा रसाए (भिडियो)
काठमाडौं, असार १५ । भनिन्छ जीवन संर्घषको मैदान हो । संर्घष एउटा लयमा बसेर गर्नेहरुका लागि सहज होला । तर अपांग आमा र सानो नानी बिच सडकमा कोरोना कहरको बिचमा राजधानी शहरको भाटभटेनीमा देखिएको यो दृश्य आँफैमा कहाली लाग्दो छ । जसमा बयान गर्ने शब्द कम स्तब्ध बनाउने दृश्य बढी छन् । यो दृश्यलाई सफलतापूर्वक कैद गर्न देवेन्द्र महर्जन सफल भएका छन् । भिडियो हेरेपछि जो कोहीका आँखा रसाउँछन् । मुटु दह्रो पारेर हेर्नुहोस् भिडियो
स्तनपानका लागि आफ्नो आमा खोजिरहेको बच्चाको संसार रुवाउँने नेपाल’को यो तस्विर
आफैंमा एक सम्मानको शब्द हो । संसारको सबैभन्दा महान सम्बन्ध नै आमा हो । आमाको महिमा कत्तिसम्म अपार हुन्छ यसको सायद हरेक सन्तानलाई थाहा हुन्छ ।आमालाई भगवान भन्दा पनि माथिको रुप मान्ने गरिन्छ । तर हामीले यसो भन्दै गर्दा गर्भमा हत्या भएको बच्चाहरुको कुरा गरिरहेका छैनौ । आमाले सन्तान जन्माएर खोलामा फ्यालेको वा फोहोरको डस्बीनमा फालेको कुराहरु गरिरहेका छैनौ । जुन बच्चाले सुन्दर संसार देख्न र महसुस गर्न पाएन उसले आमा याद गर्छ भन्ने त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । यो मानविय कुरा मात्रै होईन हरेक प्राणीमा यो कुरा लागु हुने गर्दछ , अहिले एक तस्विर एक चर्चामा आएकोछ ।यसमा देख्न सकिन्छ कि बाख्राले आफ्नो बच्चा (पाठी) लाई दुध पिलाइरहेको छ । त्यसको विपरितमा बसेर एकसानो बच्चा एकदमै चासोको साथ त्यो हेरिरहेको छ । यस्तो लाग्दो हो उसले पनि स्तनपानका लागि आफ्नो आमा खोजिरहेको छ। र त्यही बाख्राको स्तनपनि आमा
रवि लामिछाने’सँग डेट जान चाहान्छु – अभिनेत्री कुशुम राउत…
काठ्माडौं: फिल्म ‘मिस्टर नेपाली’की अभिनेत्री हुन् कुशुम राउत । आज शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको यो फिल्मबाट कुशुमले अभिनयमा डेब्यु गरेकी हुन् । देशप्रेम र प्रेमकथामा निर्माण भएको फिल्म उनी भने अभिनेता साहिल श्रेष्ठको जोडी बनेकी छन् । अभिनेता सरोज खनालले सञ्चालनमा ल्याएको एकेडेमी माला आर्टमा अभिनय प्रशिक्षण लिइरहेकी कुशुम नृत्य र द्वन्द्वको प्रशिक्षणसहित अभिनयमा होमिएकी हुन् ।पुतलीसडक धोवीधार निवासी कुशुमले कलाकारितमा शिखर चुम्ने सपना देखेकी छन् । कुशुम सानैदेखिको रहर पूरा गर्न कलाकारितामा होमिएकी हुन् । यो क्षेत्रमा जस्तै उतारचढाप आए पनि नभाग्ने सोचमा रहेकी कुशुमलाई यस्तो छ, रातोपाटीका दस प्रश्न । फिल्मको अफर कसरी आयो ? फिल्मको प्रोडक्सन मेनेजर गणेश सापकोटासँग पहिलेदेखि नै चिनजान थियो । भेटमा उहाँलाई मैले आफ्नो फिल्म अभिनय चाहना राख्ने गर्दथेँ । त्यसका लागि आफ्नो कोसिस र मिहिनेतसमेत बत
पञ्‍चेबाजा’सहित रोपाइँ (फोटो फिचर)
दैलेख : जिल्लाको नारायण नगरपालिका १ गहतारीमा पञ्चेबाजासहित रोपाइँ गरिएको छ । वडा कार्यालयको आयोजनामा १७ औँ राष्ट्रिय धान दिवसका अवसर पारेर पञ्चेबाजाको धुनसँगै स्थानीयले असारे गीत गाउँदै रोपाइँ गरेका हुन् । नारायण नगरपालिकामा पहिलो पटक राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको हो । सदरमुकाम नजिकै रहेको गहतारीमा स्थानीय किसान, नगरपालिकाका जनप्रतिनीधि, कर्मचारी, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लगाएत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी रोपाइँमा सहभागी थिए । राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा नारायण नगरपालिका र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले हाते ट्याक्टर, हिलो बनाउने र धान रोप्न मेसिन स्थानीय गहतारी फलफूल तथा कृषि सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराएको मेयर रत्नबहादुर खड्काले बताए । मेसिनहरु हस्तान्तरण गरेसँगै मेयर खड्काले नगरपालिकाले कृषिमा नयाँ प्रविधितर्फ जोड दिएको बताए ।दैलेख जिल्लाभर ६ हजार ५